ကုန်ထုတ်စွမ်းအားအမြင့်ဆုံးသို့: Brain application ကိုနက်ရှိုင်းစွာအသုံးပြုနည်း။ | Linux မှ
နောက်ဆုံးပေါ်တည်ငြိမ်သောဗားရှင်းနှင့်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်း။ အသုံး ၀ င်သောတပ်ဆင်ပုံနည်းလမ်းများအကြောင်းကျွန်ုပ်တို့ယခင်ပို့စ်တင်ပြီးနောက် ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ်နှင့် Cross- ပလက်ဖောင်း application ကို ခေါ်ဆိုခ ဦး နှောက်, ခွင့်ပြုထားတဲ့ အသုံးပြုသူကုန်ထုတ်စွမ်းအားတိုးတက်အောင် သူတို့ကွန်ပျူတာများ၏ desktop ပေါ်မှာကျနော်တို့ဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတဲ့ဒီသင်ခန်းစာကိုဆက်လုပ်သွားမှာပါ။
အကောင်းဆုံးသို့မဟုတ်အသုံးအနှုံးအချို့ကိုယင်း၏အသုံးပြုမှုနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာရှင်းပြနိုင်ရန်အတွက်အားလုံး ပလပ်ဂင်များ သငျသညျအောင်မြင်ရန်ရရှိနိုင်ပါသည်ရှိသည် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုန်ထုတ်စွမ်းအားတိုးမြှင့်၏ရည်မှန်းချက် အထူးသဖြင့်သူတို့တပ်ဆင်ထားတုန်းက၊ အခမဲ့နှင့်ပွင့်လင်း operating system ကိုကဲ့သို့ GNU / Linux များ.
သတိပြုသင့်သည် Brain အက်ပလီကေးရှင်း၎င်းသည်အလွန်လေးလံသောအသုံးချမှုမဟုတ်ပါ၊ CPU၊ RAM သို့မဟုတ် HDD အရင်းအမြစ်များသို့သော်၊ သူတို့၏အမြဲတမ်းကွန်ပျူတာများတွင်အရင်းအမြစ်များသုံးစွဲမှုအနည်းဆုံးဖြစ်လိုသောအသုံးပြုသူများအတွက်၎င်းကိုရှင်းလင်းရန်ကောင်းသည် ဦး နှောက် အထူးသဖြင့်၎င်းကိုအနားယူစဉ်ကတည်းကအသုံးပြုသောအခါ၎င်းတို့ကိုအဖိုးထိုက်သောပမာဏတစ်ခုစားသုံးစေနိုင်သည် ၎င်း၏သယံဇာတသုံးစွဲမှုသည်အလွန်လက်ခံနိုင်ဖွယ်ရှိသည်.
ထို့ကြောင့် အကယ်၍ ၎င်းသည်အရင်းအမြစ်နိမ့်ကျသောကွန်ပျူတာဖြစ်ပါကအသုံးပြုရန်မအကြံပြုပါ သို့မဟုတ်သင်သင်၏ကွန်ပျူတာအရင်းအမြစ်များ၏တစ်ရာခိုင်နှုန်းစီကိုအခြားနယ်ပယ်များသို့မဟုတ်လုပ်ငန်းများတွင်အသုံးချလိုသည်။
1 ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်း GNU / Linux - Cerebro ကိုအသုံးပြုရန်သင်ယူခြင်း
1.1 ဦး နှောက်ကန ဦး setup
1.3 scrolling ၏နည်းလမ်းများ
1.4 Keyboard ဖြတ်လမ်းများ (HotKeys)
1.4.1 C key
1.4.3 M key
1.4.5 P key ကို
1.4.6 မေး key
1.4.7 R ကိုသော့
1.4.8 S သော့
1.4.9 T key
1.4.10 ဦး သော့
1.4.11 V key ကို
1.4.12 သော့ချက်များ ၁ မှ ၉ နှင့်သော့ချက်များ» * «
1.4.13 သော့ချက်များ» + »နှင့်» - «
1.4.14 key ကို "မြှား"
ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်း GNU / Linux - Cerebro ကိုအသုံးပြုရန်သင်ယူခြင်း
ဦး နှောက်ကန ဦး setup
Cerebro ၏ကန ဦး နှင့်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဖွဲ့စည်းပုံ ဒါဟာအလွန်အခြေခံကျသည်။ သူ configuration window ကို အောက်ပါ parameters တွေကိုဆင်းအနာဆိုး။
တိုက်ရိုက် Access ကိုသော့ (HotKey)ဖြေ - ဒီအပိုင်းမှာဒီ application ကအသုံးမပြုတဲ့အသုံးအဆောင်ကိုသက်ဝင်စေဖို့လိုအပ်တဲ့သော့တွေပေါင်းစပ်ထားလို့ရတယ် မောက်စ် (မောက်စ်)။ ပုံမှန်အားဖြင့်၊ သော့ပေါင်းစပ်မှုကိုပြုပြင်ထားသည် «Ctrl+Space»။ ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့က text box ပေါ်မှာနေရာချပြီး key ကိုနှိပ်လိုက်ရင်အဲဒါကိုပြောင်းလဲပစ်လိုက်တယ် «Ctrl» ၎င်းကိုမထုတ်ဘဲဒုတိယခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ (အစားထိုး) «Space».
နိုင်ငံ (နိုင်ငံ)ဖြေ - ဒီအပိုင်းမှာငါတို့ရဲ့လက်ရှိနိုင်ငံ Cerebro ကိုညွှန်ပြနိုင်တယ်၊ ဒါမှနောက်ပိုင်းမှာအဲဒီအချက်အလက်တွေကိုသုံးပြီးငါတို့ကိုပေးတဲ့အချက်အလက်တွေကိုကိုယ်ပိုင်ဖြစ်စေတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်တစ် ဦး နှင့်အတူ ပလပ်အင် (plugins) de ရာသီဥတုအခြေအနေ) ကျွန်တော်တို့ကိုပိုပြီးတိကျတဲ့နှင့်တိုက်ရိုက်ဒေတာပေးပါ။
အဓိကအကြောင်းအရာ။ ဤအပိုင်းတွင် application ၏ graphical interface ၏အမြင်ကိုပြောင်းလဲရန်သီးခြားအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုရွေးချယ်ခွင့်ရှိသည်။ နှင့်သင်တန်း၏, တစ်ဆောင်ပုဒ်ဆောင်ခဲ့ရမည် «Dark»များသောအားဖြင့်အလွန်အမင်းများစွာသောအားဖြင့်တန်ဖိုးထားသော။
အမျိုးမျိုးသောရွေးချယ်စရာများ။ အဆုံးမှာတော့ configuration window ကိုကျွန်ုပ်တို့အားရွေးချယ်စရာများကိုပြသထားသည်။
လော့ဂ်အင်ဖွင့်ပါမှတ်ချက် - လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုစနစ်စတင်ချိန်နှင့်အသုံးပြုသူဝင်ရောက်ချိန်တွင်လျှောက်လွှာကိုဖွင့်ရန်ညွှန်ကြားရန်။ ဒီ option ကိုပုံမှန်အားဖြင့်ဖွင့်ထားသည်။
မီနူးဘားတွင်ပြပါဖြေ - အသုံးပြုသူ Desktop Environment အကြောင်းသတိပေးtheရိယာအထက်ရှိ task bar တွင်၊ တူညီသော icon တစ်ခုကိုပြသရန် application ကိုပြောရန်။ ဒီ option ကိုပုံမှန်အားဖြင့်ဖွင့်ထားသည်။
Developer Modeဖြေ - ဒီ application ကို debugging လုပ်တဲ့သူတွေအသုံးပြုတဲ့အဆင့်မြင့် option တခုဖြစ်တယ်၊ ဒါကြောင့်ဒီ option ကိုပုံမှန်အားဖြင့်သက်ဝင်စေမှာမဟုတ်ဘူး၊ သင်ဟာအဆင့်မြင့်သုံးစွဲသူမဟုတ်လျှင် activate လုပ်ဖို့မသင့်တော်ဘူး။
ဝှက်အပေါ်ရလဒ်များကိုသန့်ရှင်းရေးဖြေ - ဒီရွေးစရာကလျှောက်တင်ချက်ကိုငါတို့ရှာဖွေမှုတွေ၊ နောက်ခံလည်ပတ်မှုတွေကိုပြန်ဖွင့်တဲ့အခါတိုင်းပယ်ဖျက်ဖို့ပြောတယ်။ ဒီ option ကိုပုံမှန်အားဖြင့်ဖွင့်ထားသည်။
အမည်မသိစာရင်းအင်းများကိုပေးပို့ပါ - ပြန်လည်စတင်ရန်လိုအပ်သည်ဖြေ - ဒီရွေးစရာကိုတိုးချဲ့နိုင်ဖို့ developer တွေကိုဒီ application ရဲ့အသုံးပြုမှုနဲ့ပါတ်သက်တဲ့အချက်အလက်တွေကိုပေးပို့ဖို့ခွင့်ပြုထားတယ်။ ဒီရွေးစရာကိုပုံမှန်အားဖြင့် activate မပေးပါ။
အလိုအလျောက် crash အစီရင်ခံစာများပေးပို့ - ပြန်လည်စတင်ရန်လိုအပ်သည်ဖြေ - ဒီရွေးစရာကိုတိုးချဲ့နိုင်ဖို့ developer တွေကို application ရဲ့အမှားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်တွေကိုပေးပို့ဖို့ခွင့်ပြုထားတယ်။ ဒီ option ကိုပုံမှန်အားဖြင့်ဖွင့်ထားသည်။
ထို့အပြင် application ကိုရွေ့ရန်မောက်စ် (မောက်စ်) အသုံးပြုခြင်း၊ ၎င်းသည်ကီးဘုတ်အတွင်း၌၎င်းအတွင်း၌လှုပ်ရှားသွားလာခြင်းကိုခွင့်ပြုသည်။ ၎င်းအတွက်စီစဉ်ထားသောသော့များသည်အောက်ပါတို့ဖြစ်သည်။
ဘေးထွက် ဦး တည်မြှား « <- -> » y « ctrl + j/k » လာမယ့်သို့မဟုတ်ယခင် item ကိုရွေးချယ်ဖို့အသုံးပြုကြသည်။
သော့ « enter » နှင့်စာ « o » ပစ္စည်းတစ်ခုရွေးဖို့အသုံးပြုကြသည်။
သော့ « escape » သို့မဟုတ်ဘယ်ဖက်မြား « <- » ရွေးချယ်မှုများကိုအဓိကရလဒ်စာရင်းသို့ပြန်ပို့ရန်အသုံးပြုသည်။
Keyboard ဖြတ်လမ်းများ (HotKeys)
ဦး နှောက်ကိုချိန်ညှိခြင်း (Configuration ကိုကြည့်ပါ)
ဦး နှောက်ဗားရှင်း (ဗားရှင်းနံပါတ်ကိုကြည့်ပါ)
Brain Exit (လျှောက်လွှာကိုပိတ်ပါ)
ဝိုင်ဖိုင်ဖွင့်သည် (ကွန်ပျူတာ၏ WiFi ကိရိယာကိုဖွင့်ပါ)
ဝိုင်ဖိုင်ပိတ် (ကွန်ပျူတာ၏ WiFi ကိရိယာကိုပိတ်ပါ)
P key ကို
ပလပ်အင်များကိုစီမံပါ (ဦး နှောက်ပလပ်အင်များကိုစီမံပါ)
ဦး နှောက်မှထွက် (လျှောက်လွှာကိုပိတ်ပြီးပိတ်ပါ)
Reload ကို (လျှောက်လွှာကိုတင်ပါ)
အိပ် (ကွန်ပျူတာ hibernate လုပ်ဆောင်ချက်ကိုဖွင့်ပါ)
V key ကို
သော့ချက်များ ၁ မှ ၉ နှင့်သော့ချက်များ» * «
သော့ချက်များ» + »နှင့်» - «
Volume ကို (ကွန်ပျူတာအသံအတိုးအကျယ်အဆင့်)
key ကို "မြှား"
နောက်ဆုံး command ကိုကွပ်မျက်ခံရ (နောက်ဆုံး command ကိုကွပ်မျက်သည်)
အခုအတွက်တော့, ဦး နှောက် အောက်ပါရှိပါတယ် ရရှိနိုင် plugins ကို၎င်းတို့အနေဖြင့်၎င်းတို့၏အသုံးပြုမှုနှင့်အကောင်အထည်ဖော်မှုကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေရန်နောက်ပိုင်းတွင်အသေးစိတ်ပြောပါမည် ထွက်နိုင်ရေး အသုံးပြုသူအားလုံး၏မူပိုင်ခွင့်အသုံးပြုသောစနစ်မခွဲခြားဘဲ။
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ, ငါကထက်ပိုကောင်းပါလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ် ဦး နှောက်သည်အောက်ပါတို့ကိုတိုးတက်သင့်သည် ပိုမိုကောင်းမွန်စွာအသုံးပြုရန်
configuration window ကိုအရွယ်အစားပြောင်းရန်ခွင့်ပြုပါ။
floating search bar ကို Desktop တွင်ထားပါ။
ပိုမိုခေတ်မီသော GNU / Linux ဖြန့်ဝေမှုများနှင့်ပိုမိုသဟဇာတဖြစ်စေပါ။
ပိုပြီးပုံမှန် update လုပ်ပါ၊ ဖြည့်စွက်ထားသောအလွန်ကောင်းသော add-ons များကိုသာအာရုံမစိုက်ပါနှင့်။
ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ် "အကူအညီအနည်းငယ်သာပို့စ်" အပေါ် «Cerebro»ကျွန်ုပ်ရေးသားသူ၏ဒုတိယနှင့်ဘလော့ဂ်တွင်တတိယအချက်မှာအသုံးပြုသူများသည် ၄ ​​င်းတို့၏ကွန်ပျူတာများပေါ်ရှိကုန်ထုတ်စွမ်းအားကိုတိုးမြှင့်လိုသောသုံးစွဲသူများအားဤအက်ပလီကေးရှင်းကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေခြင်းများကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေသည်။ အကျိုးစီးပွားနှင့် utility ကိုတစ်ဖွဲ့လုံးအတွက် «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်၏အံ့သြစရာ, အလွန်ကြီးမားသောနှင့်ကြီးထွားလာ၏ applications များ၏ဂေဟစနစ်၏ပျံ့နှံ့ဖို့ကြီးစွာသောအလှူငွေ၏ «GNU/Linux».
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » ကုန်ထုတ်စွမ်းအားအမြင့်ဆုံးသို့: Brain application ကိုနက်ရှိုင်းစွာအသုံးပြုနည်း။
သင်၏မှတ်ချက်နှင့်အကြံပြုချက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ငါ 'အဲလ်ဘတ်' ကိုစမ်းသပ်နေပြီး၊ ငါမကြာမီသူမအကြောင်းကိုဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ပြုပါလိမ့်မယ်။
ယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်သည် Cerebro ၏တတိယနှင့်နောက်ဆုံးဆောင်းပါးကိုရေးသားထုတ်ဝေသွားမည်ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်၎င်း၏ကုန်ထုတ်စွမ်းအားတိုးတက်ရန်အတွက်အသုံးဝင်သောပလပ်ဂင်အချို့ကိုစီမံသည်။
ဦး နှောက်ကိုပြproblemsနာတွေမစခင်အထိအချိန်အတော်ကြာသုံးခဲ့ဖူးတယ်၊ အဲဒါကသူ့ရဲ့ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု / ဖွံ့ဖြိုးမှုရပ်တန့်နေပုံရတယ်။ ၎င်းကို ၂၀၁၇ မှစတင်၍ အသစ်မွမ်းမံနိုင်သေးပါ။ ဗားရှင်း ၃.၁ သည်ကျွန်ုပ်အတွက်အလုပ်လုပ်သော်လည်း ၃.၂ သည်တစ်ခါမျှမလုပ်ခဲ့ပါ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, Alber ကြောင်းကိစ်စတှငျပိုကောင်းဖြစ်ဟန်ရှိသည်။
ယခုအချိန်တွင်သင်ဆန္ဒရှိပါက Cerebro ၏တတိယနှင့်နောက်ဆုံးဆောင်းပါးကိုဖတ်နိုင်သည်။ အထူးအသုံးဝင်သော add-ons အချို့ (plugins) ၏စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ၄ င်း၏ကုန်ထုတ်စွမ်းအားတိုးမြှင့်ရမည်။ https://blog.desdelinux.net/complementos-cerebro-plugins-aumentar-productividad/